Osimiri kachasị ogologo na Europe na World | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | España, Francia, Osimiri
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ osimiri n’anya, ọ dịghị mkpa na ị ga-agafe “pudulu ahụ” iji nwee ike ịnụ ụtọ ụsọ osimiri kachasị mma n’ụwa, ebe ọ bụ na na Europe anyị nwere ụsọ osimiri mara mma nke dịkwa ogologo.
Ọ bụrụ na mgbakwunye n'ụsọ osimiri ị na-achọ ịhụ na ha enweghị njedebe, ị gaghị echefu ya osimiri kachasị ogologo na Europe n'ihi na ma eleghị anya, mgbe ị maara ihe ha bụ na ebe ha nọ ... ị ga-amalite ịkwadebe njem gaa ebe ndị a.
1 N'etiti mba abụọ: France na Portugal
1.1 Obodo Costa Caparica
1.2 Ala ndị ahụ
2 Osimiri kachasị ogologo n'ụwa
2.1 Praia do Cassino, Rio Grande na Brazil
2.2 Cox Bazar Beach dị na Bangladesh
2.3 Iri iteghete na New Zealand
2.4 Island Fraser, Queens, Australia
N'etiti mba abụọ: France na Portugal
E nwere mba abụọ na-asọrịta mpi maka inwe osimiri kachasị ogologo na Europe: France na Portugal. Anyị agaghị abanye n'okwu esemokwu ma anyị ga-ejedebe onwe anyị n'iwepụta mmadụ abụọ ahụ, ma oke osimiri na oke mmiri a tụrụ aro: Costa da Caparica, nke dị nso na Lisbon ga-abụ nke mbụ na nke abụọ ga-abụ Las Landes, na French Aquitaine.
Obodo Costa Caparica
Costa da Caparica bụ aja sara mbara ma mara mma ihe karịrị kilomita 230 n’ogologo n’ebe ndịda nke ọnụ nke Osimiri Tagus (ma ọ bụ Tejo dị ka ndị Portuguese kpọrọ ya). Ọ bụ ebe a ma ama ebe ndị obodo na-enubata n’oge ọkọchị ka anwụ na-acha na ya bụ ebe a na-eme ememme ama ama. Ee, ọtụtụ mmadụ na-aga n'ụsọ osimiri a mana ekele maka oke ya, ọ gaghị ekwe omume ịhụ ya ọkara ọkara.
Na nsọtụ ndịda nke Costa da Caparica bụ ebe Lagoa de Albufeira, bụ ụlọ nsọ dị n'okirikiri mmiri nke ọtụtụ osisi na anụmanụ bi na ya. Ọ bụ nnọọ mara mma! Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ oke osimiri dị egwu, ị nwekwara ike ịtụgharị uche n'okike na ịma mma ya niile. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ebe mara mma iji nọrọ ezumike nnukwu ezumike, anyị nwekwara ya nso Spain! Ọ dịghị mkpa iburu ụgbọ elu ma fee awa na awa ... Portugal bụ mba anyị nso dị nso na nke a bụ mgbaghara zuru oke iji leta ya.
Ala ndị ahụ
Anyị na-ebuli elu ala ma na-aga n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic nke France nke na-esi n'ókè Spanish gaa n'ebe ugwu ma gbasaa ruo 100 kilomita. Ọ bụ ụsọ oké osimiri nke Landes ma mejupụta ọtụtụ osimiri ndị nwere mgbagwoju anya nke obere obodo nta na-akụ azụ na mpaghara okwute kwụsịrị. Nke a bụ ihe dị iche na esemokwu na Costa da Caparica, nke bụ ụsọ mmiri na-aga n'ihu na ọ bụghị usoro nke osimiri jikọtara.
Linesọ mmiri a na-akpọ Côte d'Argent (Silver Coast) Ọ dị mma maka ndị na-achọ ebe izu ike na-enweghị igwe mmadụ ma ọ bụ na-achọ ịnụ ụtọ okike, kamakwa maka ndị hụrụ egwuregwu mmiri n'anya dịka sọọfụ, ikuku mmiri ma ọ bụ kitesurfing. Mpaghara (ma ọ bụ osimiri) nke ị na-agaghị enwe ike ịmecha ma ọ bụ gaa kpamkpam.
O nwere ike ịbụ na mgbe ị chọtara osimiri abụọ a magburu onwe ha ma chọpụta na ha bụ ndị kachasị ogologo na Europe, ugbu a ị chọrọ iwere nzọụkwụ ọzọ ma chọpụta nke ga-abụ osimiri kachasị ogologo n'ụwa. A) Ee, Mgbe ị na-ezute ha, ị nwere ike ịhọrọ ịhazi njem ọzọ ị ga-eleta ha wee hụkwuo oke osimiri n'anya na mgbakwunye na ogologo oge na Europe.
Praia do Cassino, Rio Grande na Brazil
Na-enweghị ihe na-erughị na 254 kilomita ogologo, osimiri a dị na Guinness Book of Records dị ka osimiri kachasị ogologo n'ụwa. Ọ gafere site na obodo Río Grande ruo nke Chuy nke dị na ókèala ya na Uruguay. Ọ bụ osimiri dị egwu na-agafe n'ọtụtụ obodo na nke ahụ bụ ihe ịtụnanya maka ndị njem nleta na-achọ mgbe niile ịga animated iji mara osimiri kachasị ogologo n'ụwa. Were mikpuo!
Cox Bazar Beach dị na Bangladesh
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Bangladesh na ezumike, ị gaghị enwe ike ịhapụ osimiri ọzọ a na-ewere dị ka otu n'ime ogologo oge n'ụwa na enweghị ihe ọ bụla 240 kilomita nke aja na-enweghị nkwụsị. Ọ dị na ndịda Chittagong ma nwee ụlọ arụsị Buddha n'okporo ụzọ ya.
Iri iteghete na New Zealand
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga New Zealand ị gaghị enwe ike ịhapụ ụsọ osimiri nwere n’aha ya na-enye gị azịza maka ogologo oge ọ dị. A na-akpọ ya XNUMX Miles n'ihi na nke a bụ ogologo nke na-agafe n'ụsọ osimiri ya, nke ga-abụ ihe yiri ya Kilomita 140 nke osimiri, ma ọ bụ nanị kilomita 82 ka a na-egbochi. Ọ nwere ezigbo aja na asọmpi ịkụ azụ na-emekwa. Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ezughi, ị nwere ike ịhụ dolphin, whale na anụmanụ ndị ọzọ n'etiti mmiri ya mara mma.
Island Fraser, Queens, Australia
Nke a bụ agwaetiti kachasị aja n'ụwa niile n'ihi ya, a ga-atụ anya na ọ nwere osimiri dị ogologo. Ọ dịghị ihe na-erughị 1630 km2 o nwekwara osimiri dị otu narị kilomita na iri abụọ. Ọ bụ agwaetiti toro ọtụtụ na ọkwa ndị njem n'ihi mmiri doro anya ya na gastronomy nke ebe ahụ.
Nke a osimiri bụ nnọọ touristy ruru ya 82 kilomita nke osimiri. O nwere mmiri na-emighị emi na-emighị emi ma mara ya maka ama mara mma. Osimiri a bụkwa ebe dị mma iji gaa nlegharị anya ma nwee ọmarịcha osimiri nke ndị mmadụ gbara gburugburu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ụsọ osimiri dị n’ụwa nke toro ogologo ma na ị nwere ike ịga leta ma nwee ọ freelyụ mgbe ọ bụla ịchọrọ ịga njem n’eluigwe. Ọ dị mfe dịka ịchọ ụsọ osimiri na eserese ngosi, ịchọta nke kachasị amasị gị niile na malite ịkwadebe njem zuru oke. Will ga-ede akwụkwọ ụgbọ elu ma ọ bụ tiketi ndị dị mkpa, chọta ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ebe obibi dị nso ka ọ dịrị gị mfe ịnweta osimiri ma nwee ike ịnụ ụtọ ihe niile mpaghara a họọrọ maka gị.
N'ime osimiri ndị a niile, olee nke ị masịrị? Maara nke ọ bụla? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ụsọ osimiri na ndepụta a ma ọ bụ kwuo okwu na atụmatụ ị chere na ọ dị mkpa ịtụle maka ndị njem n'ọdịnihu, nweere onwe gị ịme ya! N’ezie, site n’onyinye gị, anyị niile ga-eme onwe anyị ọgaranya na anyị ga-enwe ike ịmatakwu ọtụtụ ebe nwere osimiri mara mma n’ụwa. Echerela ogologo oge iji hazie ezumike gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Osimiri kachasị ogologo na Europe
Gulhi, ndị na-adịghị eju ndị Maldives